Anonymous Thu Jan 06, 01:21:00 AM GMT+8
Happy Birthday Ko pan thee:D
khin oo may Thu Jan 06, 01:31:00 AM GMT+8
Anonymous Thu Jan 06, 02:48:00 AM GMT+8
အောက်ဆုံးအပိုဒ်လေးနဲ့ အနားသတ်သွားတာ သဘောကျတယ်
Sunny Thu Jan 06, 03:34:00 AM GMT+8
အစ်မကလည်း စာရေးတတ်တော့ အစ်မတို့နှစ်ယောက်ပုံစံကို မျက်စိထဲ မြင်မိသလိုပဲ..
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Thu Jan 06, 03:45:00 AM GMT+8
ကဲ..ကျောင်းဆရာရေ...ပါရမီဖြည့်ဖက် ကောင်းလဲ ရထားတာမို့..
ဒီလင်ဒီမယား အသက်ရှည်ရှည်အနာကင်းကင်း..မွေးနေ့တွေ ဆင်နွဲနိုင်ပါစေဗျာ..
Anonymous Thu Jan 06, 03:56:00 AM GMT+8
rose Thu Jan 06, 06:06:00 AM GMT+8
မမ ချစ်ကြည်အေးရဲ့ ဦးပန်းသီး အားနာတတ်တဲ့ အကြောင်းလေး လာဖတ်ပါတယ်။ ပို့စ်လေးက ချစ်စရာ၊ ကြည်နူးစရာ ကောင်း၏။ ဦးပန်းသီး မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ချစ်တဲ့ အစ်မနဲ့ အတူ ထာဝရ မခွဲ အတူတူ နေနိုင်ပါစေ။
စုချစ် Thu Jan 06, 08:09:00 AM GMT+8
အစ်မချစ်ကြည်ရဲ့ ဦးပန်းသီး မွေးနေ့မှာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေလို့...
အစ်မတို့ နှစ်ယောက် ပျော်ရွှင်စွာ နဲ့ အိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်းဖက်ကြပါစေရန် ဆုပန်ချွေလျက်...
သက်ဝေ Thu Jan 06, 08:52:00 AM GMT+8
ကိုပန်းသီး မွေးနေ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်ပါစေ...
ကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ အမြဲတမ်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်...
သူငယ်ချင်း ချစ်ကြည်... January Born တွေ ဘယ်လောက် ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ သိတယ်ဟုတ်...း))
Anonymous Thu Jan 06, 09:05:00 AM GMT+8
Let sing Stevee Wonder's song together"U r not alone,i'm also the same."After reading the post,i haveabag full of MUDITA.
Happy Birthday Mr.Apple.
I like the last para most:).....Gyidaw
Thandar Lwin Thu Jan 06, 09:11:00 AM GMT+8
တော်တော်တိုက်ဆိုင်တာ၇ယ်။ မွေးနေ့ က ၁ ၇က်ဘဲကွာတာကြောင့် အမဒီပို့စ်လေးကို ကော်ပီလုပ်ပီး သူ့ကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်နော်။
အမ နာမယ်နဲ့ လင့်လဲ ထဲ့ပေးမှာပါ...ဟီး။
ဦးပန်းသီးပျော်ရွှင်ကျန်းမာစွာနဲ့ ချစ်သောမချစ်ကြည်နဲ့ အိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်းဖက်ကြပါစေရန် ဆုတောင်းလျှက်.....
sonata-cantata Thu Jan 06, 09:22:00 AM GMT+8
ကျနော့် မွေးနေ့က နှစ်ဆန်းမှာ...မွေးနေ့လက်ဆောင် ပေးချင်ရင် အင်္ကျီက L size ၀တ်တယ် ဆိုတာ သတိရတယ် :)
ဒီပို့စ်ကို ရအောင် ရောင်း... အဲလေ တင်တာကိုက ချစ်ကြည်အေးရဲ့ ကိုပန်းသီးအပေါ် ချစ်တာတွေ...မေတ္တာတွေ...❤♫♫♫
P.Ti Thu Jan 06, 09:27:00 AM GMT+8
ဟားဟား အမကတော့လုပ်ပြီ။ ဟုတ်ပါပြီ နာမည်မသိတော့လည်း ကိုပန်းသီးပေါ့။ ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ကိုပန်းသီး...
Anonymous Thu Jan 06, 09:39:00 AM GMT+8
ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါ ဦးပန်းသီး :D
သဘောတကျနဲ့ တပြုံးပြုံးဖတ်သွားပါတယ် .. :D
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ ..း)
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ Thu Jan 06, 10:05:00 AM GMT+8
မမချစ်ရေ မမချစ်ဦးပန်းသီးကြီးကို Happy Birthday ပါလို့...
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ မမချစ်နဲ့ ဦးပန်းသီးတို့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်...
မမချစ်ရေ မမချစ်ရဲ့ ဦးပန်းသီးနဲ့ ပူးတေရဲ့ မစ္စတာပီ မွေးနေ့ချင်းက ၄ ရက်ပဲကွာတယ်.. သူက ၁၀ ရက်နေ့လေ... ဒါကြောင့်ထင်တယ်... မမရေးထားတာတွေက သူ့များစောင်းရေးထားသလားထင်ရအောင်ကို ကွက်တိကျလွန်းတယ်... NTUC ပစ္စည်းတွေကိုင်ပြီး Giant ထဲကို မဝင်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ အချိန်မှာ ရီလိုက်ရတာ အူကိုတက်နေတာပဲ.... ဒီမှာလဲ NTUC က ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီး ဘုရားပန်းက Cold Storage မှာပဲ လတ်လို့ အဲမှာ ဝင်ဝယ်မလို့ ပစ္စည်းတွေကိုင်ပြီး အပြင်မှာပဲ စောင့်မတဲ့လေ... အပြင်ဆိုတာတောင် အဲဒီဆိုင်ရှေ့မှာတောင်မဟုတ်ဘူး...အဝေးကနေစောင့်တယ်...
ဒါလဲ အရမ်းတူပဲ.... :)
အောက်ဆုံးပိုဒ်လေးရေးထားတာ ချစ်စရာလေး... ကိုယ့်ငါးချဉ်မို့ တကယ်ကိုချဉ်ပါတယ်ဆိုတာလေ... :)
မမချစ်ရေ ခေါက်ဆွဲအထုတ် ပုံစံပြမယ်ဆိုတာ အကြွေးမှတ်ထားပါဦး... ဒီအကြွေးကတော့ 2011 မကုန်ခင် ဆပ်နိုင်မယ်ထင်တယ်... :P
Moe Cho Thinn Thu Jan 06, 10:16:00 AM GMT+8
အားနာတတ်တဲ့ ကိုပန်းသီး NTUC ကြွတ်ကြွတ်အိတ်ကြီးတွေနဲ့ အပြင်မှာ စောင့်နေပုံကို မြင်ယောင်ပြီး ရီနေမိတာ ငါးချဉ်သည်အမကြီးရေ့.. “ခင်မင်မှုအရေးကြီးတယ်၊ ငွေလေးနည်းနည်းကွာတာ အရေးမကြီး” လို့ ဆိုတတ်တဲ့အတွက် ပိုခင်သွားမိပြီ။
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့မင်္ဂလာပါ အကိုပန်းသီး (လူရွှင်တော် နံမည်နဲ့ တူနေပါပေါ့)။ အားနာတာကို နားလည်ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့ ငါးချဉ်သယ်လေးနဲ့ ဘ၀ဆုံးတိုင် ချစ်ခင်မြတ်နိုးနိုင်ပါစေ။
ဆုမြတ်မိုး Thu Jan 06, 10:53:00 AM GMT+8
Happy Birthday Uncle Apple :D အမချစ်ကြည်အေး ကိုက်မစားရ၀ူးနော်
rose of sharon Thu Jan 06, 11:00:00 AM GMT+8
ကိုပန်းသီးခေါ်ကိုငါးချဉ် မွေးနေ့မှာ လိုရာဆန္ဒတွေ အားလုံးပြည့်ဝပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်း)
MrDBA Thu Jan 06, 11:01:00 AM GMT+8
Happy Birthday ကိုပန်းသီး ... (စကားမစပ် အမေရိကန် ပန်းသီးလား၊ တရုတ်ပန်းသီးလား၊ သြဇီပန်းသီးလား ဟင် .. )
Rita Thu Jan 06, 11:25:00 AM GMT+8
မင်္ဂလာ မွေးနေ့ပါ အစ်ကိုပန်းသီး။
Su Thu Jan 06, 11:31:00 AM GMT+8
မဂျီးချစ်နဲ. အိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေ။
Anonymous Thu Jan 06, 11:59:00 AM GMT+8
Happy Birthday ပါ ကိုပန်းသီး မန္တလေးသားကြီးရေ ဒီလင်ဒီမယား ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ သက်ဆုံးတိုင် ပေါင်းရပါစေ
TZA Thu Jan 06, 01:00:00 PM GMT+8
သီချင်းဆိုတာရော၊ စကားပြောတာရော၊ ချစ်ဖို့ရော အကုန်ကောင်းတဲ့ ကိုပန်းသီး.. နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ.. အစ်မချစ်နဲ့ ကြင်ကြင်နာနာ ယုယုယယ ထွေးထွေးပွေ့ပွေ့ ပူးပူးကပ်ကပ် သေတပန် သက်တဆုံး ပေါင်းလည်းပေါင်း ဖက်လည်းဖက်နိုင်ပါစေဗျာ။
Heartmuseum Thu Jan 06, 01:20:00 PM GMT+8
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ် နိူင်ပါစေသတည်း ပေါ့ဗျာ....:P
Thant Thu Jan 06, 02:12:00 PM GMT+8
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ...... :))))
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Thu Jan 06, 02:17:00 PM GMT+8
မွေးနေ့မှာ မဟေသီမချစ်ကြည်ရဲ့ အစွမ်းကုန် အလိုလိုက်မှုတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ..
ယနေ့မှစ... နေ့ရက်တိုင်း ပျော်ရွှင်သာယာသော နေ့ရက်များကိုသာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ.. မမချစ်ကြီးရဲ့ အချစ်ကိုလည်း ပိုပိုပြီး ခံရပါစေ..
တူနှစ်ကိုယ် နားလည်ချစ်ခင်စုံမက်ခြင်းများဖြင့် တွဲလက်ခိုင်ခိုင်မြဲနိုင်ပါစေလို့ မွေးနေ့ဆုတောင်း ပေးပါရစေရှင်။
မိုးယံ Thu Jan 06, 02:37:00 PM GMT+8
ဦးပန်းသီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပါရမီ ဖြည့်ဖက်နဲ့ ဘ၀ခရီး ပျော်ပျော်ကြီးလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ..
စကားမစပ် ... ပါရမီဖြည့်ဖက်ကြီးခင်ဗျာ.. နှလုံးသားမဲ့တဲ့ မိန်းမကြီးမဖြစ်ချင်ရင် အိမ်ဦးသခင် ဦးပန်းသီကို အမှီလိုက်ပါ..။။
Anonymous Thu Jan 06, 02:54:00 PM GMT+8
အမချစ်ရဲ့ ကိုငါးချဉ် (ကိုပန်းသီး)...Happy Birthday ပါ...
မြသွေးနီ Thu Jan 06, 03:30:00 PM GMT+8
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ကိုပန်းသီးရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ မချစ်ရေ...
ပန်းသီးငါးချဉ် ချိုချိုချဉ်ချဉ်လေး စားသွားပါတယ်...
ရာသက်တိုင် ချိုချဉ်မွေးနေ့ပွဲလေးတွေကို ပျော်ရွှင်စွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေရှင်။
Anonymous Thu Jan 06, 03:40:00 PM GMT+8
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကိုကြီးပန်းသီးရေ မွေးနေ့မှစ သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေသော် အနားမှာ အသက်ရှည်ဆေးလေးရှိတော့ အစ်ကိုကြီးက သက်ရှည်ကျန်းမာအုံးမှား)
Zun Moe Sett Thu Jan 06, 04:13:00 PM GMT+8
A very happy birthday to bro Apple!
Sis, please convey my best wishes to your lovely hubby. :)
An Asian Tour Operator Thu Jan 06, 05:10:00 PM GMT+8
မင်္ဂလာ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ အစ်ကိုပန်းသီး။ သူ့ခင်မြာ လဲ အစ်မချစ် နဲ့ပါတ်သက် ပြီးသိတဲ့ သူတွေကို အကူအညီပေးရတာနဲ့ ခဏခဏအပိုအလုပ်ရှုပ် နေမှာပါပဲဆိုတာလဲ ကိုယ်တွေ့သိထားပြီးပါပြီ။ သဘောကောင်း တဲ့ခန့်ချောကြီး ဆိုတာလဲ မြင်ဖူး ဆုံဖူးထားလို့သိပြီးပါပြီ။ အစ်မ ချစ်ရဲ့ ငါးချဉ်ပန်းသီး မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်စွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ။ ဘာလီ ကိုလဲ ထပ်လည်ပါဦး ၁၀၁ ကြိမ်မြောက် ဟန်းနီးမွန်း ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့.....။
Anonymous Thu Jan 06, 06:05:00 PM GMT+8
Happy Birthday ဦးဦးပန်းသီး :)
Kay Thu Jan 06, 08:41:00 PM GMT+8
ဒါမဲ့..ပန်နီစူလားက..တထုပ်ဝယ်လာ မိ တယ်..
အဲဒါ နဲ့.. ၀င်မကြည့်တော့ပါဘူး လားလို့.. အားနာ စရာကြီး..ပန်နီစူလား ပလာဇာ ကြီးကို.. ဟိ. ဒါမဲ့..ငါးချဉ်သည် လည်း အားနာ လို့..တထုပ်ထယ်ဝယ်လိုက်အုံးမယ်..။း))
မွေးနေ့ ဆိုတော့ မှ.. ဦးပန်းသီး ကို လာပြီး နှုတ်ဆက် ပါတယ်။
မားစ် ဂြိုဟ် က..လူတွေက..တော်တော်တူ ကြ ပါတယ်...း)
မယ်ကိုး Thu Jan 06, 08:42:00 PM GMT+8
မမချစ်ကြည်အေးစာတွေ ဖတ်တိုင်း အစ်ကိုပန်းသီးကို လေးစားချစ်ခင်မိပါတယ် :D...
မမချစ်ကြည်အေးရဲ့ ရွှေလက်ကိုတွဲကာ မွေးနေ့မှသည် ရာသက်ပန် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
မြစ်ကျိုးအင်း Thu Jan 06, 10:01:00 PM GMT+8
အကို့ကို ပန်းသီးလို့ နာမည်ပေးထားတာနဲ့ ညီအောင်လို့
iPhone4မွေးနေ့လက်ဆောင် ပေးလိုက်အုံးနော် အမချစ်...။
ဝက်ဝံလေး Fri Jan 07, 02:39:00 AM GMT+8
ဒေါ်ချစ်ရေမရောက်တာကြာပေါ့ လေးလေးပန်းသီးကို ပြောပေးပါဦး တူမလေးကလဲ
“မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ” လို့ ပြောတယ်လို့နော်
ဖတ်ပြီးပြုံးမိတယ် ဟုတ်တာပေါ့ ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုကိုယ်မချဉ်လို့ဘူ ချဉ်မတုံး ဟားဟားးးးးးးးးးးးးးး
blackcoffee Fri Jan 07, 08:52:00 AM GMT+8
ဟား.. ဟား... တို့ ကိုကြီးကြောင့် အစ်မချစ်တော့ လူဆိုးမကြီး လုံးလုံး ဖြစ်နေပြီ။ ပျော်စရာမွေးနေ့ ပါ ကိုကြီးပန်းသီးရေ...
Mon Petit Avatar Fri Jan 07, 10:07:00 AM GMT+8
Happy Belated Birthday to your beloved husband, Ma Ma CKA.
ချစ်ကြည်အေး Fri Jan 07, 07:26:00 PM GMT+8
မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေကို အိမ်ကလူကြီး ကိုပန်းသီးကို ပေးဖတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြုံးပြုံးကြီး ဖတ်ရင်း အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတဲ့:)
ကဲ သူ့ကိုယ်စား ပြောလိုက်ပါပြီနော်....
မောင်လေး Fri Jan 07, 08:58:00 PM GMT+8
ညီမလေး Sat Jan 08, 01:23:00 PM GMT+8
ချစ်ချစ်ဦးပန်းသီးကြီးက ချစ်စရာကြီးတော့း)
ကွန်မန့်တွေကလဲ ပျော်စရာ ပြုံးစရာ တပြုံကြီးနဲ့ ... ဦးပန်းသီးကို ပြောပေးပါ ။ ဦးပန်းသီးနဲ့ ချစ်ချစ် ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့တွေကို နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တူယှဉ်တွဲလို့ ဖြတ်သန်းနိူင်ပါစေလို့ ညီမလေးလဲ ဆုတောင်းကြောင်း.....နော် ...
Anonymous Sat Jan 08, 03:42:00 PM GMT+8
မင်္ဂလာပါ မချစ် ..
ဟက်ပီး ဘတ်ဒေးပါ ကိုပန်းသီး .. :D
မိုးငွေ့...... Sat Jan 08, 09:51:00 PM GMT+8
ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါ အစ်ကိုပန်းသီး....။ ဒီနေ့ကစပြီး ချစ်စရကောင်းတဲ့ အစ်မနဲ့အတူ သက်ဆုံးတိုင်လက်တွဲနိုင်ပါစေ...။
su su Mon Jan 10, 01:48:00 AM GMT+8
ကာယကံရှင်ကိုပန်းသီးက‌တော့သ‌ဘော‌တွေကျပြီးသွား‌တွေ‌တောင်အ‌အေးပတ်‌နေ‌ရော့မယ်‌နော်...ယ‌နေ့မှစ..နှစ်တစ်ရာတိုင်..မချစ်တို့ဇနီး‌မောင်နှံ‌မွေး‌နေ့တိုင်း‌ပျော်ရွှင်စွာအတူဆင်နွှဲနိုင်ပါ‌စေ...။
Crystal Mon Jan 10, 12:46:00 PM GMT+8
အစ်မရေ ညီမကတော့ ပန်းသီးကို လုံးးးးဝမကြိုက်ဘူးရယ် :P၊ အယ်...ငါးချဉ်သုပ်တော့ သိပ်ကြိုက်။
အိုအောင်မင်းအောင်တိုင် ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်။
T T Sweet Mon Jan 10, 10:57:00 PM GMT+8
ဟယ်တော် ... ခုမှရောက်တော့တယ် ... ကိုပန်းသီးဆိုတာ ကိုငါးချဉ်ကို ပြောတာပါလား။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ အားနာတတ်တဲ့ ကိုငါးချဉ်ရေ။ ပြောရင်း ငါးချဉ်တောင်စားချင်လာပြီး)
Nge Naing Tue Jan 11, 06:37:00 AM GMT+8
မွေးနေ့အမှတ်တရပို့စ် တင်ထားမှန်းတောင် မသိလိုက်လို့ Happy Birthday ဆုတောင်းပေးဖို့ နောက်ကျသွားတာ ဆောရီးပါနော့်။ ကိုပန်းသီး မွေးနေ့အနှစ်တရာကျော်အောင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ နားလည်မှုရှိရှိ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။ ဒါနဲ့တချို့က ငါးချဉ်ကို သိပ်ချဉ်ရင် မကြိုက်ကြလို့ ငါးချဉ်က ချဉ်တိုင်းလည်း မကောင်းဘူးနော့်။
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) Fri Jan 14, 01:59:00 AM GMT+8
မွေးနေ့ကျော်မှ နောက်ကျပြီး လာဆုတောင်းဖြစ်တယ် အမရေ၊
အလုပ်များနေလို့၊ ကိုပန်းသီး ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ချစ်ကြည်အေး Fri Jan 14, 11:46:00 AM GMT+8
မောင်လေး၊ ညီမလေး၊ ကိုMKS ၊ ညီမ မိုးငွေ့၊ သူငယ်ချင်းစုစု၊ ညီမ Crystal ၊ သူငယ်ချင်း ဆွိ၊ မငယ် နဲ့ ကိုအောင်....နောက်ကျမှ ရောက်လာပေမဲ့ အပေါက်ဝက လှည့်ပြန်မသွားဘဲ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့ အတွက် သူငယ်ချင်းများ ရေးဖော်များကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်....:)
အင်ကြင်းသန့် Sun Jan 16, 12:25:00 AM GMT+8
ဒီတစ်ခါတော့ ဂျင်းက အရမ်းအားနာသွားရပြီ....
ကိုကြီးပန်းသီးရော ကိုကြီးပန်းသီးကတော် မကြီးပန်းသီးရော....
ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး လက်တွဲမဖြုတ် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကြင်ကြင်နာ သေတစ်ပန်သက်တစ်ဆုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံစွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ.....။